Waxqabadka Xawliga ku socda ee mudada kooban ee uu hirgaliyay Wasiirka Gashaandhigga Danjire Mursal?
05 March, 2018 in Maqaallo by BANA Mogdishu Office
Wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Xildhibaan Danjire Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo ku sifoobay daacadnimo Aqoon karti iyo waaya aragnimo oo mudo kooban haaya xilka wasiirnimo ayaa la soo baxay dar dar xooggan.
Wasiir Maxamed MursalMuddadii koobnayd ee uu haayay xilka Wasaaradda gashaandhigga waxaay ku talaabsatay waxqabad muuqda oo lataaban karo isla markaana wax ku ool ah oo wasaadaradda gashaandhigga aan hore ugu jirin.
Wasiir Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa dadaalkiisa ugu baddan waxaa uu ku baxshay dib u dhiska iyo tayeynta Ciidanka xoogga dalka si loo helo ciidan ka hortagi kara Cadowga nabad diidka ee shacabka u diidan in aay helaan nabad & nolol ka hortagana halistooda.
sidoo kale wasiirka wuxuu ku dhaqaaqay xoojiyay qeybta ka hortagga iyo la dagaalanka musuqa ee Wasaaradda , iyadoo la joojiyay meeshana laga baxshay lacagahii sida macno darada ku baxi jiray iyadoo loo weeciyay in ciidanka Xoogga Dalka lagu xoojiyo laguna dheeri geliyo.
"Wasiir Amb Mursal ayaa yiri Annaga iyo Shabaab waxaa naga dhaxeeya dagaalka inta ay ku sugan yihiin taako ka mid ah dhulka Soomaaliyed oo ay ku dhibaataynayan dadka soomaaliyed marna dagaalka ma joogsan doono”ayuu yiri Wasiirka Gaashandhigga Soomaaliya oo ah shaqsi wadaniya.
Wasiirka ayaa xilal ka soo qabtay wasaaradda kala duwan isaga oo inta la xusuusta xilalkii uu soo qabtay lagu amaanay Hufnaan shaqo & Howlkarnimo.